उर्जा (Energy) भनेको के हो ? | Science Infotech	उर्जा (Energy) भनेको के हो ?
by साइन्स इन्फोटेक	,	January 23, 2018
5640 पटक पढिएको
कुनै विषय वा वस्तुको प्रयोग र अवलोकनमा आधारित क्रमिक अध्ययन ज्ञानलाई विज्ञान भनिन्छ । विज्ञानमा कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई ऊर्जा भन्दछन् । सूर्यका प्रकाशमा ऊर्जा हुन्छ जसको उपयोग प्रकाश सेलहरूद्वारा बिजलीको धारा उत्पन्न गर्नमा गर्न सकिन्छ । बिजलीको धारामा ऊर्जा हुन्छ जसदेखि बिजलीको मोटर चलाउन सकिन्छ । बारूदमा ऊर्जा हुन्छ, जसको उपयोग पत्थरको शिलाहरू तोडने अथवा तोपदेखि गोला दागनमा हुन सक्छ। अणुबममा नाभिकीय ऊर्जा रहन्छ जसको उपयोग शत्रुको विध्वंस गर्न अथवा अन्य कार्यहरूमा गरिन्छ। परन्तु सारा ऊर्जालाई कार्यमा परिणत गर्नु सर्वदा सम्भव हुँदैन ।
महान् वैज्ञानिक आइन्सटाइनको विशेष सापेक्षतावादको सिद्धान्त (Special Theory of Relativity) को वैज्ञानिक सूत्र E = mc2 अनुसार ऊर्जाको मान पिण्ड वृद्धिलाई प्रकाशको गतिका वर्गदेखि गुणा गर्नमा प्राप्त हुन्छ । पिण्ड र उर्जालाई एकअर्कामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । कुनै वस्तुको पिण्ड नष्ट गर्दा उर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ । दोस्रो विश्व युद्धताका यसै सूत्रको दुरुपयोग गरी लिटिल व्वाई र फ्याट म्यान नामक परमाणु वम बनाई अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकी शहरमा ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएको थियो । ताप उर्जा, प्रकाश उर्जा, चुम्बकीय उर्जा, रसायनिक उर्जा, वायु उर्जा, रसायनिक ऊर्जा, भुगर्भिय ताप उर्जा, ध्वनि उर्जा आदि पृथ्वीमा उपलब्ध उर्जा हुन् । आधुनिक भौतिक विज्ञानमा प्रत्येक कार्यका लागि ऊर्जालाई आवश्यक बताइएको छ । ऊर्जा संरक्षण सिद्धांतका अनुसार ऊर्जालाई न त सरक्षण गर्न सकिन्छ न त नष्ट गर्न सकिन्छ केवल यसको स्वरूप मात्र बदल्न सकिन्छ ।
Tags:	Energy, उर्जा, गोपाल भण्डारी, शक्ती